Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Nkwari akụ na nkwari akụ » Enweghị ụlọ nkwari akụ nkịtị: St. Regis na -enye Ngwọta Ọhụrụ maka Nsogbu Ọha
Na-agbasa News Travel • omenala • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ okomoko • News • Mgbasa Ozi • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Ndị na -atụpụta ụkpụrụ ụlọ bụ Trowbridge na Livingston bụ ndị hiwere isi na New York.
Ndị mmekọ ụlọ ọrụ ahụ bụ Samuel Beck Parkman Trowbridge (1862-1925) na Goodhue Livingston (1867-1951).
Trowbridge gụrụ akwụkwọ na Trinity College dị na Hartford, Connecticut. Na ngụsị akwụkwọ ya na 1883, ọ gara Mahadum Columbia ma mechaa mụọ ihe na mba ofesi na American School of Classical Studies na Athens na Ecole des Beaux-Arts na Paris.
Mgbe ọ laghachiri New York, ọ rụrụ ọrụ maka onye na -atụpụta ụkpụrụ ụlọ George B. Post. Goodhue Livingston, sitere na ezinụlọ a ma ama na New York colonial, nwetara akara ugo mmụta mahadum na nke gụsịrị akwụkwọ na Mahadum Columbia. Na 1894, Trowbridge, Livingston na Stockton B. Colt guzobere njikọ aka nke mere ruo 1897 mgbe Colt hapụrụ. Firmlọ ọrụ ahụ haziri ọtụtụ ụlọ ọha na nke azụmahịa ama ama na New York City. Ewezuga ụlọ oriri na ọ. okporo uzo.
Na 1905, St Regis bụ ụlọ nkwari akụ kachasị elu na New York, na-eguzo na elu 19 ụlọ elu. Ọnụ ụlọ bụ $ 5.00 kwa ụbọchị. Mgbe ụlọ nkwari akụ ahụ meghere, ụlọ ọrụ mgbasa ozi kọwara St. Regis dị ka "ụlọ nkwari akụ kachasị mma na akụ na ụba n'ụwa."
Ihe owuwu a riri ihe karịrị nde $ 5.5, ego anaghị anụ n’oge ahụ. Astor ewepụghị ihe ọ bụla na arịa ya: ala marble na paseeji sitere na okwute Caen, Louis XV arịa ụlọ si France, Waterford kristal chandeliers, ochie tapestries na Oriental ute, a n'ọbá akwụkwọ jupụtara 3,000 akpụkpọ anụ-eke agbụ, akwụkwọ ọla edo. O tinyewo ọnụ ụzọ mbata ọla ọla ọcha abụọ mara mma, ogwe osisi na-adịghị ahụkebe, nnukwu ọkụ ọkụ marble, uko ụlọ ịchọ mma na ekwentị n’ime ụlọ ọ bụla, nke na-adịghị ahụkebe n’oge ahụ.
Mgbe e mepere ụlọ oriri na ọ.
St.lọ St. Regis
“Mgbe edere ụlọ nkwari akụ St. Regis ọ dị mkpa icheta na anyị na -emeso ọ bụghị ụdị ụlọ oriri na ọ ordinaryụ hotelụ nkịtị, kama ọ bụ ihe ngwọta nke nsogbu mmekọrịta ọha nke ọnọdụ nke ugbu a manyere anyị. Oge bụ mgbe ụlọ nkwari akụ ahụ na -enye echiche maka ebe mgbaba maka onye njem; Otú ọ dị, n'ụbọchị ndị a, ọ ga -agarịrị ndị nwere ezi ụlọ, bụ ndị ọ na -adịrịkarị mfe imechi ụlọ ha otu izu ma ọ bụ ọnwa ole na ole; ndị mmadụ echiche nke inye ntụsara ụlọ, ezigbo ọrụ na nri, na ikuku ụtọ na nụchaa abụrụla ihe isi ike. Ichebara klaasị ndị Amerịka okwu n'ụzọ ezi uche dị na ya, na-eleghara onye ọbịa nke otu abalị ma ọ bụ izu anya, ma ọ bụ ọbụna nri abalị na-adịghị mma, bụ echiche Maazị Haan, onye isi ala na mmụọ nduzi nke ụlọ ọrụ ahụ. Banyere nkwado ya site na Col. John Jacob Astor na nkwado ọkachamara nke ndị na -atụpụta ụkpụrụ ụlọ, Messers. Trowbridge Livingston, St. Regis na Fifty-XNUMXth Street na Fifth Avenue guzo dị ka ihe ncheta…
Regis kpuchitere oghere dị puku square iri abụọ, ma ugbu a bụ ụlọ nkwari akụ kachasị ogologo na New York. A họpụtara ọnọdụ ya nke ọma, n'ihi na, ebe ọ dị na etiti mpaghara kacha mma obibi na New York, n'okporo ụzọ awara awara obodo na n'ime mgbochi anọ nke Central Park, ọ dị mfe ịnweta site n'akụkụ niile, yana ọtụtụ ụlọ ahịa kacha mma n'obodo. , yana ogige ntụrụndụ, adịghị anya ịga ije. Maka ndị na -ahọrọ ịnya ụgbọ ala, ọrụ ụgbọ ala dị mma dị njikere abalị na ehihie…
Nke ngalaba ịdị ọcha na nchekwa dịkwa atụmatụ abụọ, nke a na-erigbu na St. Regis na nke mbụ ruo oke ha- nhazi maka ikuku dị ọcha na ikpofu uzuzu na unyi. A na -etinye sistemụ ikuku na -amanye ikuku yana radieshon na -apụtachaghị ìhè nke na -enye ụlọ ahụ dum ikuku dị ọcha, dị ọkụ, ma ọ bụ jụọ oyi ka ihu igwe nwere ike ịchọ… ..
N'ime ụlọ ọ bụla dị okpukpu anọ ma ọ bụ ise ka ikuku nke elu na-abata, na-enyocha ya site na nzacha akwa cheese, na-ekpo ọkụ site na ịgafe mkpuchi uzuoku, wee jiri ọkụ eletrik kesaa ya site na ọwa mmiri ruo n'ọnụ ụlọ dị iche iche. A na -ezobe ọpụpụ n'ime ụlọ ndị ahụ na ihe ịchọ mma na -enweghị atụ na mgbidi ma ọ bụ na ọrụ ọla ọla ịchọ mma nke na -ekere oke na ihe ịchọ mma. Onye ọbịa ahụ nwere ike ịhazi oke okpomọkụ n'ime ụlọ ya site na igwe na -akpaghị aka. A na -echekwa mgbasa ikuku na -aga n'ihu n'ime ụlọ ahụ, abalị na ehihie: enweghị drafts, enweghị ikuku oyi na -atụ egwu; n'eziokwu, onye ọbịa agaghị emepe windo ya ka e nye ya oke ikuku dị ọcha. Sistemụ a bụ nnukwu ọganiihu karịa oge ochie nke na-eme mkpọtụ na jọrọ njọ na ejighi n'aka na oke ọkụ enyere. Ndị na -eku ume na -awụpụ ikuku na -adịghị ọcha. ”
A ghọtara ụlọ dị mkpa dị mkpa n'ụlọ ahụ ma kọwaa ya na akwụkwọ St. Regis Hotel: